Fiainam-pirenena Archives | La dépêche de MadagascarLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY	Categorie: Fiainam-pirenena	Vangaindrano: Raikitra ny fandrobana, mirehitra ny tanàna	20/01/2017	Rédigé par:	Prisca RANJALAHY
Laisser un commentaire	Nafana ny toe-draharaha tany Vangaindrano, omaly. Norobain’ny mponina ny tanàna rehefa nandà ny hanaovana fitsaram-bahoaka ireo tovolahy telo nahiana ho namono tovovavy 19 taona ny mpitandro ny filaminana _Mihoa-pefy tanteraka ny mponina sasany ao Vangaindrano. Trano am-polony no kilan’ny afo ao Lopary, kaominina iray ao an-toerana, ary maro ihany koa ireo fivarotana voaroba nanomboka omaly…
Fikambanana Mampiely baiboly: Hamoaka baiboly amin’ny finday handoavam-bola	20/01/2017	Rédigé par:	Prisca RANJALAHY
Laisser un commentaire	Hiezaka hifehy ny fivoaran’ny teknolojia izahay. Izany no ambetin-tenin’ny mpitandrina Rakotoarivony Hubert, mpiandraikitra eo anivon’ny Fikambanana Mampiely baiboly eto Madagasikara, omaly. Ny resa-be mahakasika ny firohotan’ireo mpino mankany amin’ny fivoaran’ny teknolojia vaovao no voalaza fa antony hanaovana izany ka hisy ny baiboly handoavam-bola fitahiry anaty finday. “Marihina anefa fa tsy natao hanoherana ny fanapahan-kevitry ny…
Antanimbarinandriana: Naaton’ny Kaominina ny fananganana trano famakiam-boky	18/01/2017	Rédigé par:	Prisca RANJALAHY
Laisser un commentaire	Nofaritan’ny Kaominina Antananarivo renivohitra ho tsy nanara-dalàna ny fanorenana trano famakiam-bokin’ny EPP Antanimbarinandriana, omaly. Naato avy hatrany noho izany ny asa fananganana _Nanao bemidina teny Antanimbarinan-driana ny Kaominina, omaly. Nanome baiko ny hampiatoana ny asa fanorenana ny trano famakiam-bokin’ny EPP teny an-toerana Ravalomanana Lalao, ben’ny tanàna, noho ny tsy fahitany ny fahazoan-dàlana. “Sokajianay ho tsy…